Manchester City oo Ka Adkaatay Kooxda West Bromwich Albion “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester City oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka ingiriiska ayaa garoonkeeda Etihad Stadium 3-0 uga badisay kooxda West Bromwich Albion.
Ciyaaryahan Gareth McAuley ayaa daqiiqadii labaad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda West Bromwich Albion.
Garsoorihii ciyaarta Neil Swarbrick ayaa sheegay in roosada uu qalad ku siiyay ciyaaryahan Gareth McAuley,iyadoo uu lahaa ciyaaryahan Craig Dawson oo qaladka galay.
Kooxda Manchester City ayaa waxaa sedaxda gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Wilfried Bony, Fernando iyo David Silva.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 61-dhibcood,halka kooxda West Bromwich Albion ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 33-dhibcood.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Ka Qeyb-galay Aas Garoowe Loogu Sameeyay Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Wakiilada Maamulkaasi "Sawirro"